ဖြတ်တောက်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့, Charcuterie ဘုတ်အဖွဲ့, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ - တံတားပုံစံ
အံဆွဲ Organizer သဘာဝ
အံဆွဲ Organizer အနက်ရောင်
တံတားပုံစံ BambooCustom Flatware အံဆွဲ ...
လက်ကား Premium Bamboo Utensil Drawer Organiz ...
လက်ကားဝါးအံဆွဲ Organizer (7-9 slot) B ...
လက်ကားမီးဖိုချောင်အသုံးအဆောင်အံဆွဲ Organizer, Bam ...
လက္ကားအသုံးအဆောင်အံဆွဲ Organizer, မီးဖိုချောင်သုံး Tra ...
Fujian Bridge Style Furnishings Co. , LTD သည်အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်၊ ဥယျာဉ်နှင့်အိမ်အပြင်ဘက်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများစွာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သော e-commerce အာရုံစိုက် BAMBOO နှင့် WOOD စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုမြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပတစ်လွှားရှိအမေဇုန်ရောင်းသူများသို့ပေးအပ်သည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်၎င်း၏အပြည့်အ ၀ ပိုင်ဆိုင်သည့်စက်ရုံသည်စတုရန်းမီတာ ၈၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး BSCI, FSC, ISO9001. ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း၊ တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုသည် Fujian Bridge Style Furnishing Co. , Ltd ကိုထက်ပိုမိုသော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ Amazon သည်ရောင်းသူ ၁၀၀၀ နှင့်ရေရှည်အကျိုးအမြတ်ရှိသောစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုထိန်းသိမ်းသည်။
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးစသည့်ကိစ္စရပ်များကိုဟောပြောချက်၏ရှေ့တန်းမှရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ ရေရှည်တည်တံ့သောဘဝလမ်းစဉ်ကိုလက်ခံရန်နှင့်အားပေးရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေနေကြသည်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဓိကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုက ၉ ရာခိုင်နှုန်းကပဲပေါ်လာလို့ပါ။
China Cross-8order E 一 Com ၏တံတားပုံစံ ...
တံတားပုံစံကို China Cross-8order E-Commerce Trade Fair တွင် 2021 သြဂုတ်လ 2021 မှ 2021 သြဂုတ်လအတွင်းတင်ပြမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကြည့်ရှုရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ရက်ချိန်းကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ရောင်းချပါ။ sale10@bridge-style.cc +8613314915509 (Whatsapp, Skype ။ Wechat) ။ အို ...
စာရွက်စာတမ်း ၃ မျိုးလိုအပ်သည်။
စီးပွားရေးအင်အားတောင့်တင်းလာသောအခါကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်တင်သွင်းရာတွင်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုအားကောင်းလာနေသဖြင့်သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်အချိန်နှင့်အမြန်ဆုံးလိုအပ်သည်။ နောက်ဆောင်းပါး Bridge Style သည်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။